Football Khabar » कोपा इटालियामा आजदेखि अन्तिम १६ का खेल हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
कोपा इटालियामा आजदेखि अन्तिम १६ का खेल हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
जारी सिजन अन्तर्गत इटालीको नकआउट फुटबल प्रतियोगिताका कोपा इटालियामा आजबाट अन्तिम १६ का खेल सुरु हुँदैछन् । लिग विश्राम भएर कोपा आज रातिबाट सुरु हुन लागेको हो । आज पहिलो दिन जम्मा तीन खेल हुनेछन् । आज हुने पहिलो खेलमा राति ७ः४५ बजेबाट नापोली र पेरुगियाको खेल हुनेछ । यो खेल नापोलीको घरमा हुनेछ । पछिल्ला दुई खेलमा लगातार हारेको नापोलीका लागि आजको खेल महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यस्तै, आजको दोस्रो खेलमा राति १०ः४५ बजेबाट लाजियो र क्रेमोन्सेसको खेल हुनेछ । यो खेल लाजियोको घरेलु मैदानमा हुनेछ । आजको अन्तिम खेलमा इन्टर मिलान र क्याग्लिअरीको भिडन्त हुनेछ । यो खेल मिलानको घरेलु मैदानमा राति १ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ । बाँकी खेल अर्को दिन हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७६, मंगलवार १३:००